သစ်မွှေးပင် စိုက်ပျိုးခြင်း လမ်းညွှန် (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သစ်မွှေးပင် စိုက်ပျိုးခြင်း လမ်းညွှန် (၁)
သစ်မွှေးပင် စိုက်ပျိုးခြင်း လမ်းညွှန် (၁)
Posted by Wai Aung Chan Myo on Feb 7, 2012 in Copy/Paste | 30 comments
 သုတေသနစာတမ်းများအရ သဘာဝအားဖြင့် သစ်မွှေးပင်၁၀ပင်လျှင်၁ပင်သာ အဆီခဲဖြစ်တည် နိုင်ခြင်း၊ အဆီခဲဖြစ်တည်နိုင်သည့်အပင်မှာလည်း သက်တမ်းအနည်းဆုံး နှစ်၃၀မှ၅၀ အတွင်းမှသာ ဖြစ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် (Artificial Infection) သဘာဝကိုတုပ၍ ဆေးထိုးသွင်းခြင်းကို အနည်း ဆုံး အပင်လုံးပတ် 3cm (DBH) (၂နှစ်သားမှ ၃နှစ်အတွင်း) ခန့်မှ စတင်ထိုးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ဆေးထိုးပြီးနောက် ၁၈လ(တနှစ်ခွဲ)ကြာလျှင် အပင်ခုတ်လှဲ၍ အဆီထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 မစိုက်ပျိုးခင် မိမိစိုက်ပျိုးမည့်မြေနေရာကို ဦးစွာ ပထမ ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ရပါမည်။ မိမိစိုက်ပျိုး မည့် မြေဧရိယာရရှိမှုပေါ်မူတည်၍ ၆’x၆’၊ ၇’x၇’၊ ၈’x၈’၊ ၁၀’x၁၀’ ခြားစီ ၁ပေခွဲပတ်လည်ကျင်းများ တူး၍ မြေသြဇာထည့်(နှပ်)ပြီး နှစ်ပတ်ခန့်အကြာ တွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ စိုက်ပျိုးမည့် မြေတွင် အရိပ်ရပင်များရှိနေပါကတတ်နိုင်သရွေ့ ထိုအပင်များကို ချန်လှပ်၍ စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ သရက်၊သီဟိုဠ်၊ရာဘာ၊ဆီအုန်း၊ကော်ဖီ၊ဒညင်း၊လိုင်ချီး၊ထောပတ်စသော နှစ်ရှည်ပင်များသာမက ဟင်းသီး/ရွက်ပင်များနှင့်လည်း ရောနှောစိုက်ပျိုး နိုင်ပါသည်။
 သို့ရာတွင် အပင်ခြေမှ၂ပေခွဲ၊ ၃ပေပတ်လည် အထိ အပင်ကြီးများမရှိစေရန် အကွက်စီစဉ်၍ စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။ ပေါင်းပင်များကို ၂လ၊၃လ လျှင်တစ်ကြိမ် ပေါင်းရှင်းပေးရပါမည်။
 မစိုက်ခင်ငှက်ပျောကိုတလကြိုတင်၍ အပင်မှ ၃´ခြားစီ (သစ်မွှေးကို ၆’x၆’ပတ်လည်စိုက်လျှင်) ၄ပင်ပတ်လည်ခြံရံ၍ စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ သစ်မွှေး ပင်၃နှစ်သားကျော်လျှင် ငှက်ပျောကိုခုတ်ရမည်။
 မိုးရာသီတွင်အပင်ခြေရင်း၌ရေမ၀ပ်စေရန် ၁ပေခွဲ ပတ်လည်ခန့် မြေပြင်ညီမှ ကုန်းမို့မို့သဏ္ဌာန် မြေဖို့ပေးပါ။
 မြေသြဇာကိုတစ်နှစ်လျှင် (မေလနှင့်နိုဝင်ဘာလ) ၂ကြိမ်ကျွေးရပါမည်။
 မိုးရာသီမှလွဲ၍ကျန်လများတွင်ရေကို အနည်းဆုံး ၂ရက်၁ကြိမ်လောင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ နေအလွန်ပူ၍ အရိပ်နည်းပါက အနည်းဆုံး၁ရက် ၁ကြိမ်လောင်းပေးသင့်ပါသည်။ ၂နှစ်သားကျော် လျှင် ရေသောက်မြစ်ကောင်းစွာစုတ်မိချိန်၌ ရေလျော့လောင်းနိုင်ပါသည်။
 ရေလောင်းချိန်ကို နွေရာသီတွင် မနက် ၆-၉နာရီ အတွင်း၊ ဆောင်းရာသီတွင် မနက် ၉-၁၁နာရီ အတွင်း၊ ရာသီဥတုနှင့် မြေကြီးအစိုဓာတ်တို့ပေါ် မူတည်၍ မနက်ပိုင်းကို လောင်းသင့်သည်။ ဆောင်းတွင်းနှင့် မိုးများဆက်တိုက်ရွာလွန်းလျှင် (အပင်ပတ်လည်တွင်ပေါင်းမြက်များထူထပ်လွန်း လျှင်) မှိုကျတတ်၍ မှိုဆေးကျွေးရန်လိုပါသည်။
ရေလောင်းမှုကို လျှော့ချလိုလျှင် အပင် ၏ ၂ပေ ပတ်လည် မြေပြင်ပေါ်တွင် ကောက်ရိုး၊ ၀ါးရွက်၊ အရွက်ဆွေးတို့ကို ပုံထားပါက ရေဖြန်းပြီး နောက်တစ်ရက်ညနေတိုင် မြေကြီးအစိုဓာတ်ရှိနေသေး၍ တရက်ခြားတခါသာ လောင်းပေးရန် လိုပါသည်။
 နေရာဒေသပေါ်မူတည်၍ ပိုးကျမှုမှာ ကွာခြား တတ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံအရ မိုးမကျမီနှင့် မိုးကုန်လများတွင် ပိုး ပို၍ကျတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုးကျသည့်လက္ခဏာရပ်များကို စောစီးစွာတွေ့သည်နှင့် ဆေးကြိုဖြန်းထားသင့် ပါသည်။ လိုအပ်၍ မှိုဆေး၊ အားဆေးနှင့် ပိုးသတ် ဆေးများကိုလောင်းလျှင် ညနေ နေအေးချိန်များ တွင်သာ လောင်းသင့်သည်။ ထိုဆေးများကို တစ်ပြိုင်နက်(တချိန်တည်း) မလောင်းသင့်ပေ၊ အနည်းဆုံး၃ရက်ခြားစီကွာ၍ လောင်းသင့်သည်။
 အပင်၁နှစ်သားအရွယ်တွင် မြေချစိုက်ပျိုးရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်၍ မိုးမစခင် မေလအကုန် ဇွန်လဆန်းတွင်မြေချစိုက်ပျိုးရန်အကြံပြုပါသည်။
 သစ်မွှေးပင်မှာ ၂နှစ်သားအရွယ်အထိ သေချာစွာ ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပျိုးပင်၁နှစ် သားအပင်ဝယ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးပါက ၁နှစ်ခန့်သာ ဂရုတစိုက် စိုက်ပျိုးပေးရန် လိုပါသည်။
သဘာဝစိုက်ပျိုးနည်းကို နောက်ပိုင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါမည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၃ ၊ ၄နှစ်ဆိုတာ ခဏလေးပါ။
အောင်မြင်မှုကို လိုချင်ရင် ရေရှည်စီမံကိန်းဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် လုပ်ရမှာပဲ မဟုတ်လား
ဗီယက်နမ် ဘာကြောင့် ချမ်းသာသလဲ ?
အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေထဲက ၁ခုကို ပြောရင် သစ်မွှေးစိုက်လို့လို့ ပြောရင် ယုံမလား။
ထိုင်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေထဲက အရေးပါတဲ့ အရာကို ပြောပါဆိုရင် သစ်မွှေးဆိုတာ ငြင်းနိုင်မယ်မထင်ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ကောင်းစားရေးကို ရှေးရှုပြီးပြောကြကြေးဆိုရင် တစ်ယောက် သစ်မွှေး၁ပင်သာစိုက်နောင် ၈နှစ်မှာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်မှာ သေချာသလောက်ပါပဲ
အဲဒီ သစ်မွှေးပင်ကို အညာဒေသမှာ စိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေပါ့မလား မသိဘူး။
အညာမှာက ရေကရှား၊ နေကလည်း ပူဆိုတော့ ခက်မယ်ထင်တယ်ဗျ။
သစ်မွှေးစိုက်ရင် ဘယ်လောက်လောက် ကုန်နိုင်မလဲ မသိဘူး။
ကျနော့်ယောက္ခမရဲ့ခြံ ၊ မိတ္ထီလာပေါ့၊ အဲ့ဒီမှာ အပင် ၅၀၀လောက်စိုက်ထားတယ်။ ပျိုးပင်ကတော့ ၃၀၀၀ကျော်စိုက်ထားတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျနော်ပြောချင်တာက မြန်မာပြည် ဘယ်နေရာမှာမဆို ရေမ၀ပ်ရင် စိုက်လို့ရပါတယ်။ စိုက်တဲ့နည်းပညာသာလိုတာပါ။
ကျနော် ရဲ့ အထက်က post ထဲမှာလည်း တော်တော် စုံစုံ ရေးထားပါတယ်.။ နောက်လည်း အလျင်းသင့်သလိုရေးသွားပါ့မယ်။
ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကျယ်တ၀င့်ကို ဆက်ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်။
အကို့ဆီမှာ ၁။ မြေရှိမယ် ၊
၂။ ရေလောင်းပေါင်းသင်လုပ်မယ့် လူရှိမယ်။
ကျနော့်ဆီမှာ သစ်မွှေးပင် ၁နှစ်သားကို ၁၅၀၀ နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော့်ဆီမှ မဟုတ်ဘူး တခြားcompany မှာလည်းရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွာခြားမှုတွေတော့ ရှိနိုင်တာပေါ့။
ဟုတ်ပီ ခန့်မှန်းခြေ ၁ ဧကနှုန်း နဲ့ စဉ်းစားရင် အလွယ်ပြောရင် ၁ဧက အပင် ၁၀၀၀ ပေါ့။
အဲ့ဒီတော့ အပင်ဖိုးက ၁၅သိန်း။
မြေသြဇာဖိုးက ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၀သိန်းမှ ၁၅သိန်း။ (သဘာဝနည်းဖြင့် စိုက်လျှင် ၁၀ပုံ ၁ပုံ သက်သာတယ်။
ရလာမယ့်ဟာကို အကြမ်းဖျဉ်းတွက်ပြရင် ၁ပင် ၁၀သိန်းနဲ့ပဲ တွက်ကြည့်ပါ။
ဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာ မက်မောလောက်အောင် ရေးပြထားတာမဟုတ်ဘဲ သေချာလေ့လာရင် အမှန်ပဲဆိုတာ သိလာမှာပါ။
သစ်ပင်တိုင်းကတော့ ဂရုစိုက်ရမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်မှာ နည်းပညာလက်စွဲရှိပါတယ်။ နောက်ကျနော့်ရဲ့ posts တွေမှာလည်း ဘယ်လိုစိုက်ရမယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ဒီသစ်မွှေးကို လုပ်ငန်းတခုလို သဘောထားပြီး မစိုက်နိုင်ရင်တောင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးနိုင်မယ့်လမ်းလည်းရှိပါတယ်။
ရေကို ပုံမှန်လောင်းပေးမယ်။ သဘာဝစိုက်ပျိုးနည်းပညာနဲ့ အပင်ကို ပြုစုပေးမယ်။
တစ်နှစ်သားပျိုးပင်ဝယ်စိုက်ရင် တစ်နှစ်လောက်ပဲ ဂရုစိုက်ရမှာပါ။ နှစ်နှစ်သားအရွယ်ကျော်တာနဲ့ သိပ်ဂရုစိုက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
သစ်မွှေးပင်က အမြစ်မစွဲဘူးလို့ ပြောသံကြားတယ်။ ဟုတ်လား မသိဘူး။ လူနေတဲ့ ခြံဝင်းထဲမှာ ၁၀ပင် အပင်၂၀ စိုက်ရင်ကော အဆင်ပြေနိုင်လား သိချင်ပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် အပင်ရဲ့အမြစ်ကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
သစ်မွှေးပင်ရဲ့အမြစ်ဟာ ပင်စည်ရဲ့အမြင့် ထက် အနည်းဆုံး ၁ဆခွဲ ရှည်ပါတယ်။
နောက် သူဟာ အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နှစ်ကို ၄ပေနှုန်းတက်ပါတယ်။
လူနေတဲ့ ခြံဝင်းပတ်ပတ်လည်ကို ၆ပေခြားကနေ ၁၀ပေခြားအထိ စိုက်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ၄၀ x ၆၀ ခြံ ဆိုရင် သစ်မွှေးပင် အပင် ၂၀ မှ ၃၀ အထိ စိုက်နိုင်ပါတယ်။ ခြံကျယ်ရင် နောက်တစ်တန်းတောင် ထပ်စိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စားတဲ့ ထမင်းသိုး၊ သစ်သီးအပုပ်သိုးများကို အိုး၁အိုးထဲထဲ့ပြီး သကြား ၃၀%နဲ့ ရေ၂ဆ လောက်ရောပြီး ၂ပတ်လောက်ထားထားရင် သဘာဝရွက်ဖြန်းဆေးဖြစ်ပါပြီ။ အဲ့ဒါကို ရေ အဆ ၅၀၀ရောပြီး အပင်ကို ဖြန်းပေးရင် အပင်ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်။
နောက် ထမင်းကိုငှဲ့ချက်ရင် ထမင်းရည်ကို မသွန်ဘဲ အိုး၁အိုးထဲ ထဲ့ထားပြီး သကြားညိုကြမ်း ၃ပုံ၁ပုံလောက်ရောပြီး ၂ပတ်လောက်ကြာကြာထားပေးပါ။ သဘာဝရွက်ဖြန်းဆေး တစ်မျိုးရပါပြီ။
ဒါတွေက ကျနော်ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့စမ်းသပ်အောင်မြင်တဲ့ အကုန်အကျသက်သာတဲ့ နည်းတွေပါ။
အပင်ဝယ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလိပ်စာကို ဆက်သွယ်လိုက်နော်။
စိုက်ချင်တဲ့ သူရှိရင်လည်း share ပေးပါအုံး။
ကျွန်တော် မိတ္ထီလာက အစ်ကို့ယောက္ခမရဲ့ ခြံ လိပ်စာသိချင်ပါတယ်။သွားပြီလေ့လာချင်လို့ပါ။
ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းမဘေး၊ ကျီတော်ကုန်နယ်မြေ၊ ကံဦးရပ်ကွက်၊ ဒေါ်ခင်ရွေအိမ်လို့မေးရင်သိပါတယ်။ မိုးကောင်းဘုရားနဲ့ ၀မ်းတော်ပြည့် ဘုရားကြားမှာပါ။ ရွှေစံအိမ်စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ကပ်ရပ်ပါ။
ဖုန်းကတော့ 064-24002 ပါ။
ဗီယက်နာမ်တွေ ထိုင်းတွေ သစ်မွှေးအကြီးအကျယ်စိုက်ခဲ့ကြတာ ခုမှသိတယ်
စိတ်ဝင်စားရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူးလေ ကို မိုက်ကယ်ရဲ့
ကျနော် အခု NGO အဖွဲ့တွေနဲ့ ချိတ်ထားတယ်။
အန်တီစုကိုလည်း ပြောခွင့် ရရင် ပြောပြချင်တယ်။
မြန်မာပြည်အနှံ့ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ အစိုးရရုံးတွေနဲ့ ကားလမ်းမဘေးတွေမှာပဲ စီမံချက်နဲ့စိုက်မယ်ဆိုရင်ပဲ တော်တော် အလုပ်ဖြစ်နေပါပြီ။
ကျနော်လည်း နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေကို လှူဖို့ ပြင်ထားပါပြီ။
စိတ်နာရင် လာပြီးရိုက်သတ်လှဲ့ပါလားဟဲ့….။ နင်သိပ်လေမကျယ်နဲ့ဘုဘု …။ အားလုံးတူတူနဲ့ နူနူ ချည့်ပဲ….။ ခေါင်းပေါ်ချီတက်ပါမဲ့ကောင်တွေချည့် တွေ့နေတယ်…။
အခုလည်း သစ်မွှေးနဲ.ပတ်သက်တာတွေကိုလိုက်ရှာရင်းဖတ်ရင်းနဲ. အကိုရေးထားတာတွေကိုတွေ.ရဖတ်ရတော့ ကျွန်တော့်အတွက်ပညာတွေအများကြီးရတယ်ဗျာ ၊ ကျေးဇူုးအရမ်းတင်ပါတယ် အကို.ရဲ.စိတ်စိတ်သဘောထားနဲ.ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း အားပေး ထောက်ခံပါတယ်၊ ကျွန်တော် အကို.ဆီ (email ) ပို.ပြီးတိုင်ပင် အကြံတောင်းချင်တာတွေရယ် အကို.ရဲ. စိုက်ခြံကိုတခေါက်တော့ရောက်အောင်လာပြီးလေ့လာဖို.ရယ် ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်
ဗဟုသုတတွေ မျှဝေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲ အကိုရေ…….
ကျွန်တော် အကို.ဆီက နည်းပညာတွေအကြံညံတွေ တောင်းစရာတွေအများကြီး ရှိလာအုံးမှာပါ ………..
အခုလို ကျနော်ရေးတဲ့ဟာတွေက တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ပဲ ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။
ကျနော် အကို့ဆီက email ကို စာပြန်လိုက်တယ်နော်။
သန်လျင်က သစ်မွှေးခြံကို လာလည်ဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
နောက်လည်း သိချင်တာများကို စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း၊ သစ်မွှေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေ ဒီထက်မက သိရှိနားလည်ပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ကာ ကြီးပွားစေရေးအလို့ငှာ အားတက်သရော ကူညီဆောင်ရွက်သွားဖို့ အမြဲ အသင့် ရှိနေကြောင်းထပ်လောင်းပြောပါရစေ။
စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းပါတယ် ၊ စာရေးသူကိုကြည့်ရတာ စေတနာကောင်း
ကောင်းနဲ့ ဒီပို့စ်ကိုရေးတာလို့ ယုံကြည်မိပါတယ် ၊
အသေးစိတ်လေး သိခွင့်ရတာမို့ အားရဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ် စာရေးသူ ။
သစ်မွှေးအကြောင်း အားလုံးသိရှိနားလည်စေဖို့ ဒီပို့စ်တွေကို ရေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်အခုလိုရေးပေး ရှင်းပြပေးနေတာကို ကြိုက်သူလည်းရှိပါတယ်၊ မကြိုက်သူလည်းရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ကတော့ ဆက်လက်ရေးသားနေအုံးမှာပါ။
ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာဟာ လူတဦးတယောက်အတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ပဲ အဖိုးတန်လှပါပြီ။
မကြိုက်သူ ဘယ်သူရှိမလဲဗျာ ၊ ကိုဝေအောင်ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ ၊
သစ်မွှေး အပင်ပေါက်ဈေးနှုန်းတွေကိုလဲ အမျုိးအစားခွဲပြီးရေးပေးပါဦး၊
ကျုပ်က ယိုးဒယားမျိုး အပင်ပေါက်ဝယ်ချင်လို့ပါ ။
အတိုကောက် (A.S ) ခေါ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ် ။
ဇွန်၊ ဇွန်လိုင် လမှာ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးဖို့ စိတ်ဝင်စားနေလို့ပါ ။
ပျိုးပင်တွေကို ၁ပေကို ၅၀၀ကျပ်နှုန်းနဲ့ ၂ပေကနေ ၄ပေကျော်အထိရှိပါတယ်
၂ပေမှ ၂ပေခွဲကို ၁၀၀၀ကျပ်
၂ပေခွဲမှ ၃ပေကြားကို ၁၃၀၀ကျပ်
၃ပေမှ ၃ပေခွဲကြားကို ၁၅၀၀ ကျပ်
၃ပေခွဲမှ ၄ပေကြားကို ၁၈၀၀ ကျပ်
ပျိုးပင်အားလုံးက တစ်နှစ်သားအရွယ် မြစ်ကြီးနားမျိုးဖြစ်တဲ့ Aquilaria Agllocha မျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာ ကျနော်တခုပြောချင်တာက အများက အမှတ်မှားနေတာလေးပါ။ ယိုးဒယားမျိုးဖြစ်တဲ့ Sub-integra မျိုးကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေးပါ။ အခုဆိုရင် ကိုချာလီလည်းသိမှာပါ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားကိုမှ အထင်ကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပါ။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ ကမ္ဘာ့သစ်မွှေးဈေးကွက်ကို မထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အတွက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတဆင့် မှောင်ခိုဈေးကွက်နဲ့ ရောင်းရတဲ့အတွက် မြန်မာ့သစ်မွှေးဟာ မျိုးကောင်းသော်လည်း လူရာမ၀င်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းဈေးကွက်ကပဲ နာမယ်ရနေတာလေးကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကိုယ့်မြေသယံဇာတအလျောက် သူ့အလိုလိုပေါက်နေတဲ့မျိုးကသာ ပိုဖြစ်ထွန်းလွယ်ပါတယ်။ ယိုးဒယားမျိုးအစစ်ကိုရဖို့က တကယ်တော့ အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ သူတို့ခြံကနေ လေဆိပ်ကမှတဆင့် ဒီကို တခါ ဆင့်ကာဆင့်ကာသယ်ရမှာပါ။
နောက် မျိုးစေ့သဘောက ၂၄နာရီအတွင်းစိုက်နိုင်မှ မဟုတ်ရင် ဖြစ်နှုန်းနည်းပြီး မအောင်မြင်နိုင်လို့ပါ။
အရမ်းကြိုက်မိသွားပြီ ကိုဝေအောင် ရေ ၊ သစ်မွှေးစိုက်ပုံစိုက်နည်းတွေကို ပါရှင့် ။
အခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ
စိတ်ထားဖြူသူက တချိန်မှာ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရလာမှာပါ။
စီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုရင် စိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် နေစရာတောင် အိမ်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ စိုက်စရာ မြေနေရာရှာရဦးမယ်…
San Maung Thein says:
ကျွန်တော်က ထီးချိုင့်ဘက်မှာ ဂရိတ်ဝေါသကြားစက်တည်ရှိရာ ကြံစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာတွေမှာ
သစ်မွှေးပင်စိုက်ဖို့ရာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကြံလို အချိန်တို အပင်အမျိုးအစားများနဲ့
သစ်မွှေးပင်များကို ရောပြီး စိုက်ပျိုးလို့ရမရ သိချင်ပါတယ်။ သစ်မွှေးပင်အကြောင်းကို ကြားဖူးပြီး
စိုက်ချင်နေတာကြာပြီ ဖြစ်သော်လည်း စနစ်တကျ နည်းလမ်းများကို မသိတာက တစ်ကြောင်း၊တစ်ချို့က
မြေသြဇာခမှာ အရမ်းဈေးကြီးသည်ဟုပြောကြသည်ကတစ်ကြောင်း၊အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် သစ်မွှေးပင်ကို မစိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် သစ်မွှေးပင်အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဖြေကြားပေးလိုပါတယ်။
သို့မဟုတ် mr.aung100@gmail.com သို့ ပေးပို့ကာ ဖြေကြားပေးပါလို့ လေးစားစွာ တောင်းဆိုပါတယ် ကိုဝေအောင်ခင်ဗျာ။
ကျနော် သစ်မွှေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့စာအုပ်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
နောက် ကြံပင်တွေခြား သစ်မွှေးကို စိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အနဲဆုံး ၆ပေခြားစိုက်ရင်ရပါတယ်။
နောက်မြေသြဇာဖိုးက ဒီအတိုင်းဝယ်ရင် ဈေးကြီးပေမယ့် ကျနော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်နောက်ပိုင်း သဘာဝ ရွက်ဖြန်းဆေးတွေ။ သဘာဝမြေဆီလုပ်နည်းတွေကို အကျယ်တ၀င့် ရေးပေးထားပါတယ်။
နောက် မရှင်းတာရှိရင်လည်း ဖုန်းဆက်ပြီးသော်၎င်း၊ emailပို့သော်၎င်း မေးနိုင်ပါတယ်
ခြံလိပ်စာ- သန်လျင်-ကျောက်တန်းကားလမ်းမဘေး(ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဝင်းအနီး)၊ ပျဉ်ထောင်ချောင်းရွာ၊ နတ်စင်ကုန်း မှတ်တိုင် (ကျိုက်ခေါက်ဘုရားမှ ၆မှတ်တိုင်မြောက်) တွင်ဆင်း၍၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဂိတ်တွင် သစ်မွှေးခြံကို ပို့ပေးပါဆိုရင်……
tunwai lin says:
ကိုဝေအောင် ဒီပို့လေးအတွက် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် တော်တော်များများလည်း ဗဟုသုတ ရလိုက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်အပင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ် ။ သစ်မွေးအပြင် တခြားသော အပင်များရဲ့ အချက်အလက်များကိုလည်း လေ့လာချင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်သိချင်တာများရှိရင် မေးခွင့်ပြုပါ ။နောက်ပြီး ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်း ၊ သီးပင် ၊ စားပင်၊ နှစ်ရှည် ၊တို ၊ လတ် ၊ အစရှိသဖြင့် အကျယ်တပွင့် ရေးသားထားသော ဝက်ဆိုဒ် လေးတွေများရှိရင် ပြောပြပေး ပါ အုံး ခင်ဗျာ… အကိုရဲ့စေတနာကိုလေးစားလျက်
ကျနော်က သစ်မွှေးတမျိုးထဲကိုပဲ စူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်နေခဲ့တာပါ။
အခြားအပင်တွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတကတော့ ကျနော့်ထက်သိတဲ့သူပိုများပါလိမ့်မယ်။
ကျနော် သစ်မွှေးကိုလေ့လာတုန်းကလဲ internet ကိုပဲ အားကိုးရတာမို့ အကိုသိချင်တာတွေကို googleမှာ ရှာဖို့ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမှတော့ တနေရာတည်း အားလုံးကို အစုံသိဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက် ဘယ် website တခုထဲကဖြင့် အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို အကုန်လုံးမှန်ပါတယ် ယတိပြတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ အကုန်လုံးကို ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်ပြီး လေ့လာရတာပါပဲ။
ကိုဝေအောင်…သစ်မွှေးပင်အကြောင်းကို ကျနော်စိတ်ဝင်စားနေတာကြာပါပြီ…အခုလိုသိခွင့်၇တဲ့အတွက် ကိုဝေအောင်ကိုအ၇မ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…အကို့ဆီမှာ သစ်မွှေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးများ၇ှိ၇င် ကျနော့်၇ဲ့မေးထဲကို အချိန်၇မယ်ဆို၇င် ပို့ပေးပါဗျာ…tapindainaymin@gmail.com ကိုပို့ပေးပါဗျာ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ကျနော်ရေးထားတဲ့ သစ်မွှေးအကြောင်းစာအုပ်ကို ကိုနေမင်း မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
မရောက်ခဲ့ရင်လဲ ပြန်ပြောပါ။ အဲ့ဒီစာအုပ်မှာ သစ်မွှေးအကြောင်းအစုံအလင်ပါပါတယ်။ နောက် သဘာဝစိုက်ပျိုးနည်းတွေပါ ရေးထားပါတယ်။
နောက် စာအုပ်ဖတ်ပြီး မရှင်းလင်းတာများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့်ဆီက အပင်ဝယ်မှ မဟုတ်ဘဲ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေနေတာပါ။